प्रेमगीत २ कि नायिका अश्लेषा ठकुरी मिडियामा, डिप्रशेनकै कारण बनिन् योग गुरु (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > प्रेमगीत २ कि नायिका अश्लेषा ठकुरी मिडियामा, डिप्रशेनकै कारण बनिन् योग गुरु (भिडियो सहित)
प्रेमगीत २ कि नायिका अश्लेषा ठकुरी मिडियामा, डिप्रशेनकै कारण बनिन् योग गुरु (भिडियो सहित)
admin June 16, 2020 भिडियो, मनोरञ्जन, समाचार	0
नायिका अश्लेशा ठकुरी अर्थात गीत को अभिनय पहिलो हाफमा अपरिपक्व लाग्न सक्छ । तर हेर्दै गए पछी कथा अनुसार उनको अभिनय ठिकठिकै लाग्छ । पहिलो चलचित्र भएकाले पनि अश्लेशाको यो कामलाई ठिकै भन्न सकिन्छ । तर आगामी दिनमा उनले यो प्रकृतीको अभिनय गरेरमात्र पुग्दैन् ।
चलचित्र म्यानमारबाट सुरु हुन्छ, ४ पुस्तादेखि बर्मा बस्दै आएका नेपालीहरुको जीवनशैली देखाउदै फिल्म अघि बढ्छ । लामो समयदेखि विदेशी भुमिमा विदेशी नागरिकको हैसियतमा बसेपनि नेपाल र नेपाली संस्कृती मोह त्याग्न नसकेका बर्मेली नेपालीहरु आफ्नो मातृभुमी र यो देशका नागरिकहरुबाट कस्तो व्यवहार भोग्न बाध्य छन् भन्ने पनि चलचित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
मिलन र बिछोडका थुप्रै पुलिन्दा जोडिएको चलचित्रको सेकेन्ड हाफमा नायक प्रदिप म्याचोर स्टेटमा देखिन्छन् । अफ्नो माया पाउनको लागि प्रेमले गरेका अनेक प्रायस र संघर्षले दर्शकलाई बाधिरहन्छ । निर्माता तथा चलचित्रका भिलेन सन्तोश सेनलाई फाइटर अङ्गदको भूमिकामा गजबस“ग पर्दापण गराइएको छ । अभिनयका हिसाबले कमजोर भएपनि उनले आफ्नो चरित्रलाई न्याय गर्न हरसम्भव प्रयास गरेका छन् । उनको एटिच्युड गजबको लाग्छ । अंगदको प्रवेश पछि चलचित्र अर्को रोमान्चक मोडमा पुग्छ । आगामी दिनमा अभिनयका हिसाबले सन्तोषले आफ्नो संभावना पेश गरेका छन् ।
चलचित्रमा मयान्मार बाट आफ्नो देश नेपाल घुम्न आएकी गीत को भेट प्रेम स“ग हुन्छ र उनले घुम्न र साथै गीतको हजुरआमाको चिनो भेटाउन पनि प्रेमले सहयोग गर्छन र त्यही क्रममा प्रेम, गीत को प्रेममा पर्छन् । गीत मयान्मार फर्किन्छे । र, प्रेम पनि गीतको खोजीमा जान्छन् । त्यसपछि प्रेमले गीतलाई पाउ“छन कि पाउ“दैनन् ? आङ्गदको ट्रेलरमा देखिएको फाइट किन गरेको हो भन्ने कुरा चाहि चलचित्र हेरे पछि नै थाहा हुन्छ ।
अन्तत चलचित्रमा देश प्रेम, प्रेम र गीत वीचको प्रेम र आङ्गदको प्रेमलाई पनि देख्न सकिन्छ । चलचित्रको सिनेमाटोग्राफी अब्बल लाग्छ । प्राविधिक हिसाबले चलचित्र जर्बजस्त लाग्छ । रारा ताल आसपासका क्षेत्र देखि बैंककसम्मका दृष्य गजबका छन् । चलचित्रको शिर्षगीत र त्यसको छायाकंन पनि तारिफयोग्य छ । मध्यान्तर अघिका २ गीत भनें अकल्पनिय हिसाबले जर्बजस्ती घुसाइएका छन् । अमिल्दो ढंगले प्रवेश गरेका ती गीतले खासै अर्थ राख्दैनन् । चुस्त तरिकाले कथा वस्तु बगेपनि बीचबीचमा लय नमिल्दा खल्लो लाग्छ । क्लाइमेक्सका सन्दर्भमा पनि बलिउड फर्मुलाको साथ लिइएको छ । कमजोर नायकले साहस जुटाएर फाइट खेलेपनि उसको निरिहताले क्लाइमेक्स खल्लो बनाइदिएको छ ।
यद्यपी प्रेमगीत २ समग्रमा राम्रो प्रेमकथाको एउटा चलचित्र हो । चलचित्र हेरुन्जेल बोर हुने खासै ठाउ नभएकाले यो चलचित्रलाई दर्शकले राम्रो चलचित्रको ट्याग दिएका हुन् । नेपाली चलचित्रलाई माया गर्ने दर्शकले यत्तिको चलचित्र हेर्दा खासै फरक नपर्ला ।
फेरि यस्तो खुशी! भारतीय सेनाकाे डरले भा’गेकाहरू नेपाली सशस्त्रकाे गस्तीपछि गाउँ फर्किन थाले
देहत्याग गर्नु १ दिन अघि गर्लफ्रेन्डलाई लिएर कहाँ गएका थिए सुशान्त ?
आज थपिएका दुबै कोरोना संक्रमित नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मी!
आफ्नै श्रीमानले नां*गै पारेर परपुरुषसँग बाँधीदिएपछि रुँदै न्यायको भिख माग्दै श्रीमति – (भिडियो सहित)
भारतमा नेपाली विद्यार्थी हेमन्तको मृ’त्यु , युनिभर्सिटीले नै बेपत्ता बनाएको आंशका ! यस्तो छ भित्रि रहस्य